Uvele enkantolo osolelwa ukubulala intombi | News24
Uvele enkantolo osolelwa ukubulala intombi
ISITHOMBE: SITHUNYELWE Uvele enkantolo owesilisa osolelwa ukubula uNkk Zanele Florence Nxumalo.
OWESILISA, oneminyaka engu-31, owase Sakhamkhanya, uvele enkantolo yeMantshi yaKwaDukuza ngeledlule ngokusolelwa ukubulala intombi yakhe.
Okhulumela amaphoyisa aKwaDukuza, u-warrant officer Johannes Khoza, uthe umsolwa waboshwa ngoLwesine oledlule, ngomhlaka 28 kuMasingana (January) 2016, kulandela ukuthi amaphoyisa alunywe indlebe ngalesi sigameko.
Amaphoyisa asola ukuthi inkulumo mpikiswano phakathi kuka msolwa nentombi yakhe, uNkk Zanele Florence Nxumalo, yaphetha ngokuthi kuphume isidumbu sika Nkk Nxumalo.
Kusolaka ukuthi umsolwa wabeseyasishisa isidumbu sika mufi ngemuva kwalokho wasifihla emphongolweni. Kusolakala ukuthi ngokuhamba kwesikhathi umsolwa wabe eseyosilahla endlini yangasese isidumbu sika mufi.
U-Warrant officer Khoza uthe isidumbu sika mufi satholaka endlini yangasese ngenkathi amaphoyisa enza uphenyo.
UNkk Nxumalo, waKwaNodunga, ku-ward 27, KwaDukuza, wagcina ukuba sekhaya ngoLwesithathu, ngomhlaka 21 kuMfumfu (October), ngonyaka odlule.
UBaba kaNksz Nxumalo, uMnuz Joseph Nxumalo uthe indodakazi yakhe yahamba ekhaya ngoLwesithathu, ngomhlaka 21 kuMfumfu 2015 ithi iyovakashela isoka layo endaweni yase Sakhamkhanya.
UMnuz Nxumalo uqhube wathi ngesonto elilandelayo, ngoLwesibili, ngomhlaka 27 kuMfumfu 2015, isoka lendodakazi yakhe lafona lithi lifuna ukukhuluma noNksz Nxumalo, kodwa amalungu omndeni alitshela isoka ukuthi ubengakaze abuye ekhaya, bona njengo mndeni bebazi ukuthi uNksz Nxumalo usahlezi nalo isoka.
Ngokusho kuka Mnuz Nxumalo isoka lase libikela umndeni ukuthi uNksz Nxumalo wahamba ngoLwesihlanu, ngomhlaka 25 kuMfumfu 2015 ethi ubuyela ekhaya.
Ngomhlaka 29 kuMfumfu 2015 ubaba kaNksz Nxumalo wabikela amaphoyisa aKwaDukuza ngokulahleka kwendodakazi yakhe.
Umsolwa uvele enkantolo yeMantshi yaKwaDukuza ngoLwesine, ngomhlaka 4 kuNhlolanja (February) 2016 kanti uphenyo lusaqhubeka.